जिवन विकास लघुवित्तको शेयर मूल्यमा लगातार सकारात्मक सर्किट, यस्तो छ कारण - Share Gyan
शेयर ज्ञान — August 16, 2021 add comment
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा लगातार सकारात्मक सर्किट लागिरहेको छ। गत साउन १४ देखि नेप्सेमा सुचिकृत भै कारोबारमा आएको जीवन विकासको शेयरमा सुरुदेखि नै उच्च खरिद चाप देखिएको छ। वित्तीय पक्ष सवल रहेको कारण शेयर मुल्यमा आकर्षण देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको ईपिएस ११३.३४ रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ ३१५.२२ रहेको छ।
कस्तो संस्था हो?
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था २०६९ साउन २६ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७५ फागुन ३ गते घ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र रहने गरी इजाजत पाएको संस्था हो।
२०७५ फागुन १६ गते देखि औपचारिक रुपले कारोबार शुरु गरेको यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र राष्ट्रियस्तरको रहेको छ । जीवन विकास लघुवित्त र सल्भ लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर कार्य सम्पन्न भएर २०७७ भदौ २२ गते देखि एकिकृत कारोबार शुरु गरेको थियो।
हाल लघुवित्तले १९ जिल्लाहरुमा १३८ शाखा कार्यालयहरु मर्फत आफ्नो कारोबार गर्दै आइरहेको छ । गरिबी रहित नेपाल निमार्णको मुल ध्येयका साथ अगाडी बढेको लघुवित्तले ग्रामिण क्षेत्रका विपन्न परिवारको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय मोरङ जिल्ला, कटहरी गाँउपालिका बडा नम्बर २ मा रहेको छ ।
तीन वर्षमा सञ्चित नाफा करिब एक अर्ब पुर्याउने लक्ष्य
लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सञ्चित नाफा ९४ करोड ८७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक २०७६/७७ सम्म कम्पनीको सञ्चित मुनाफा ३५ करोड ४२ लाख ६२ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५७ करोड ९२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८२ करोड ७२ लाख ६ हजार रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा प्रतिशेयर नेटवर्थ २६९ रुपैयाँ ४५ पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी ६३ रुपैयाँ ५९ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ३०७ रुपैयाँ ६० पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी ९५ रुपैयाँ २१ पैसा पुग्ने लघुवित्तको अनुमान छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यवसाय तथा सेवा वृद्धिको लागि ग्राहकको आवश्यकता अनुसार सेवा विस्ता गराउदै लैजाने रणनीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा कम्तिमा पनि थप ५८ वटा शाखा कार्यालयहरु विस्तार गरी थप ३ अर्ब १६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र थप १० अर्ब ७४ करोड १५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवहा गर्ने लघुवित्तको लक्ष्य रहेको छ । संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा प्रशासकिय सुदृढिकरणमा जोड दिदै लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल दिलाउने तर्फ प्रतिबद्ध रहने पनि संस्थाले जनाएको छ ।
कति पुग्ला मूल्य ?
हुन त शेयर बजार ह्युमन इमोसनले चल्ने भएकोले यति नै भन्न नसके पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण र विगतलाई हेर्ने हो भने ६००० सजिलै पार गर्नु पर्ने हो। लघुवित्त समुहमा बलियो कम्पनीको रुपमा रहेको जीवन विकासको शेयर मुल्य अघिल्लो महिला लघुवित्त संग तुलना गर्ने हो भने पनि जीवन विकासको मुल्य माथि नै जाने देखिन्छ। ९२.९८ ईपिएस रहेको महिला लघुवित्तको मुल्य ५७४९ सम्म पुगेको थियो। कारोबारमा आएको १२ औं दिनमा आइपुग्दा शेयर मूल्य २९३४.८० रुपैयाँ पुगेको छ।
वित्तीय विवरण यहाँ हेर्नुहोस !